आँचलका श्रीमान् ‘बच्चाको बुबा’ भएको चर्चा, के हो बास्तबिकता ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आँचलका श्रीमान् ‘बच्चाको बुबा’ भएको चर्चा, के हो बास्तबिकता ?
आँचलका श्रीमान् ‘बच्चाको बुबा’ भएको चर्चा, के हो बास्तबिकता ?
2,911 Less thanaminute
काठमाडौँ – नायिका आँचल शर्मा र उदिप श्रेष्ठले एक वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई फागुन २९ गते विवाहमा परिणत गरे ।
निकै तामझामका साथ विवाह गरेकी आँचलको विवाहमा गरेको खर्च, लुगा गहना अझ रिसेप्सन पार्टीमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेको कुराले बजारमा राम्रै स्थान पायो ।तर, यो सँगै उदिपको पहिलो विवाहको हल्ला पनि जताततै सुनियो तर आधिकारिक जानकारी भने बाहिर आएन ।
बजारमा चलेको हल्लाका अनुसार ‘उदिपको पहिले नै विवाह भइसकेको थियो र जसबाट एक सन्तान पनि थियो ।
फिलिपिन्समा विवाह गरेका उनले डिभोर्स गरेका हुन्’। यति ठूलो हल्ला चलिरहँदा पनि आँचल र उदिपले केही बोलेका थिएनन् । तर केहि समय अघि मात्र एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उदिपले आफू दुई वर्ष लामो प्रेमसम्बन्धमा रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले आफू फिलिपिन्समा हुँदा एक महिलासँग रिलेसनमा रहेको र दुई वर्ष पछि सम्बन्ध टुटेको बताएका छन् । यद्यपि उनले बच्चाको बारेमा केही बोलेका छैनन् । उदिपले आफ्नो सम्बन्ध किन टुटेको भन्ने पनि आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भएको र यसबारे थप बोल्न नचाहने बताएका छन् ।
सिपोरा गुरुङ्गका साथ उदिप श्रेष्ठ ।
आँचलले समेत व्यक्तिगत कुरा भएकाले यसबारे नबोल्नै ठिक हुने बताएकी छिन् । उनले आफ्नो र नायक पल शाहको सम्बन्ध र विवाहमा उनी नआउनु पनि ‘पल’को व्यक्तिगत कुरा भएको बताएकी छिन् । यसमा आफ्नो भन्नु केही नभएको उनी सुनाउँछिन् ।
दशैं अफर, सस्तो मुल्यको पल्सर बाइक ( मूल्य सहित ) हेर्नुहोस् ।
टिकटकबाट भाईरल जुम्ल्याहा दिदीबहिनी रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि भिडियोमा रुदै आए ! मिडियामा आएर यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस)
युएईबाट आयो नेपालीहरुको लागि अत्यन्तै दुखको खबर